Ngubani Igama LikaThixo? | Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiNdebele IsiNdonga IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVenda IsiVietnam IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Bonke abantu banamagama. Nkqu nezilwanyana zasekhaya sizipha amagama! Ngaba ke ngoko asifanele silindele ukuba noThixo abe nelakhe igama? EBhayibhileni, uThixo ubizwa ngezibizo ezininzi, njengesithi uThixo uSomandla, iNkosi enguMongami nesithi uMdali, kodwa ke unalo igama lakhe.—Funda uIsaya 42:8.
Iinguqulelo ezininzi zeBhayibhile zinalo igama likaThixo kwiNdumiso 83:18. Ngokomzekelo, kwiNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele, le vesi ithi: “Wena, ogama linguYehova, nguwe wedwa Oyena Uphakamileyo phezu komhlaba wonke.”
Kutheni sifanele simbize ngegama lakhe uThixo?
UThixo ufuna simbize ngegama lakhe. Xa sincokola nezalamane okanye abahlobo, sidla ngokubabiza ngamagama abo—ingakumbi xa besivumela ukuba senjenjalo. Ngaba asifanele ke ngoko simbize ngegama lakhe uThixo xa sithetha naye? Ngaphezu koko, uYesu Kristu wathi sifanele silisebenzise igama likaThixo.—Funda uMateyu 6:9; noYohane 17:26.
Noko ke, ukuze sibe ngabahlobo bakaThixo sifanele sazi okungakumbi ngaye kunokwazi nje igama lakhe. Ngokomzekelo, unjani uThixo? Ngaba umntu unokusondela kuThixo? IBhayibhile iyayiphendula le mibuzo.